ओलि ले बनाउलान त बाम्देव लाई प्रधानमन्त्री ? बालुवाटारमा वारपार : सो विषय को छिनोफानो हुँदै। – Namaste Dainik
May 2, 2020 May 2, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ओलि ले बनाउलान त बाम्देव लाई प्रधानमन्त्री ? बालुवाटारमा वारपार : सो विषय को छिनोफानो हुँदै।
काठमाडौं । केही दिनयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्र निकै चर्चा र बहसको विषय बनेकोे‘वामदेव कार्ड’को सम्भवत : आज शनिबार छिनोफानो हुदैछ । अपरान्ह बस्ने पार्टीको हेडक्वार्टर मानिने नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको वामदेव कार्डको छिनोफानो हुने एक सचिवालय सदस्यले बताए ।
उठेका विषय र आएका प्रस्तावहरुमा ठोस छलफलपछि निर्णय हुन्छ । उठेका विषयहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । आउने प्रस्तावहरु कस्ता हुनेछन् त्यो हेर्न बाँकी छ,’ति सदस्यको भनाइ छ ।
बैशाख ८ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न शनिबार बस्ने सचिवालय बैठक निर्णायक हुने भएकाले यसलाई नेकपाका लाखौँ नेता–कार्यकर्ताले गम्भीर चासोका साथ हेरेका छन् ।
गत बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग्ने मनसायले बालुवाटार पुगेका नेताहरुलाई अध्यक्ष ओलीले पद वाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्रको राजनीति एकाएक युर्टन भएको थियो। तर,ओलीले उक्त प्रस्ताव मनदेखि राखेका हुन् वा अल्मल्याउने प्रयासमात्र हो भन्ने निक्र्योल भने शनिबारको उनको प्रस्तुति,प्रस्ताव र सामुहिक निर्णयबाट मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ ।
त्यहीँ भएर शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री छोड्ने,वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष दिने बुधबारकै प्रस्ताव दोहोर्याउलान् वा अब आफू सच्चिएर जाने,सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरामा पार्टीको निर्देशन मान्नेलगायतमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्लान् ? सोही कुराले नेकपाको भविश्यसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको‘वामदेव’कार्ड : अन्त्य होला त धोकाको शृङ्खला ?
बुधबारको सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । तर ती भेटवार्तामा के कुराकानी भए भन्ने खुलेको छैन । तर,नेता माधवकुमार नेपालले ओलीले गरेको तेस्रो वरियताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उनी निकटका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । उता कोरोना संक्रमणपछि प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वसन पाएका गौतम भने पहिलेको तुलनामा ओलीप्रति नरम बन्दै राजनीतक र कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज नभएको सुझाव धेरैले दिएपनि उनमा आएको अडान परिवर्तनले भैँसेपाटी गठबन्धनमा एकमत भएका नेताहरु सशंकित बनेका छन्।अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ ।
यदि ओलीको प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्ने हो भने गौतम प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको अवस्थामा कुनै एक क्षेत्र खाली गराएर उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। र,त्यहाँबाट उनले जित्ने ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ । यो विवादपछि गौतमले जुनसुकै स्थानमा खाली गराएर चुनाव लडेपनि उनलाई हराउन धेरै शक्ति एकीकृत हुनेछ । अर्को सम्भावित बाटो भनेको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसमा खाली रहेको एक पदमा गौतमलाई पठाउने हुनसक्छ ।
तर यो संविधान संशोधन गर्ने विषय थप जटिल छ । किनभने कुनै एक व्यक्तिको रहर पुरा गर्न संविधान नै संशेधन गर्न थालियो भने मुलुक अस्थिरतातर्फ जानेमात्रै होइन यसले भयानक दुर्घटना समेत निम्तिन सक्छ । यो सवै बुझेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुन विकल्प रोज्छन् र कस्तो प्रस्ताव सचिवालयमा लैजान्छन् भन्ने कुराले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ ।
नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना गर्दै सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीप्रति आत्मालोचनासहित सरकारले अबदेखि गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको छलफल र सुझावलाई शिरोधार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए धेरै कुराको समाधान हुनेछ । नत्र पुरानै शैली र ढर्रामा जान खोजे वा इगो साँधेर अघि बढ्न खोजे अवस्था थप असामान्य हुनसक्छ ।
बंगलादेशबाट नेपाली विद्यार्थीको बिन्ती:सरकार हवाईजहाज पठाइदेऊ,भाडा आफैँ तिर्छौं ।
थप १७ जनामा को`रोना देखियो,संक्रमितकाे संख्या २०८ पुग्याे
May 12, 2020 May 12, 2020 Namastedainik
बिदेसबाट आएका देवरबाट सं`क्रमण भएकि महिला आज को`रोना जितेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइन् ।